युगसम्बाद साप्ताहिक - सत्ताको नसाले सक्कली बाबुराम देखाइदियो : महेश्वर शर्मा
Tuesday, 04.07.2020, 09:36am (GMT+5.5) Home Contact
सत्ताको नसाले सक्कली बाबुराम देखाइदियो : महेश्वर शर्मा
Monday, 03.12.2012, 03:09pm (GMT+5.5)
जे गर्न खोजिन्छ त्यसको उल्टो पाटो पनि हेर्नुपर्छ । एकोहोरो हेराइबाट विपरीत पनि पर्नसक्छ भनेर विचार पु¥याउन नसक्दा यहाँ सर्वत्र अस्तव्यस्तता छ । विना सोचविचार, विना योजना हचपचमा गरेका कामले कोल दिएका छैनन् । घर बनाउँदा पहिले नक्सा बनाइन्छ । नक्सा पनि जग्गाको स्थिति हेरेर बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ जताततै मुख्र्याइ मात्रै छ । संविधान बनाउने भनियो तर के कस्तो स्वरुपको राज्य र शासन व्यवस्थाका लागि भन्ने रुपरेखा नै तयार पारिएन । त्यसैले दुईगुना म्याद थप्दा पनि संविधानको छेउ टुप्पो केही छैन । हामी के गर्न कहाँ जान हिंड्दैछौं भन्ने नै पत्तो नभएपछि अलमल हुनु अनौठो होइन । संघीयताका बारेमा पनि त्यस्तै मुख्र्याइ गरियो । त्यसैले अन्योल अझ बाक्लिदै छ । राज्य पुनःसंरचा र शासकीय स्वरुप निर्धारणका सम्बन्धमा पनि नेताहरूले ‘छोराछोरी नपाउँदै कन्धनी बाट्ने’ काम गरे । शक्तिका स्रोत जनता हुन् त भनियो, तर जनतालाई नै नसोधी मनपरी गर्न थालियो । संविधान पनि आआफ्नै पार्टीको अनुकूल बनाउने कसरत अझै जारी छ । त्यसको परिणाम आज थप अन्योल सिर्जना भएको छ ।
आज देशमा अनियमितता, अभाव र भ्रष्टाचार व्याप्त छ । रोजगारीको अवसर छैन, सधैं बन्द र सधैं हड्तालका शृङ्खला जारी छन् । महंगी खपिनसक्नु छ । जनतालाई बाँच्नै मुस्किल छ । चरम अत्याचार हुँदा पनि विद्रोह हुँदैन ? यो प्रश्न व्यापक चर्चामा छ । तर के कुरा निश्चित छ भने सामान्य जनता स्वतः विद्रोहमा उत्रदैनन् । गरिब जनताका माग नै साना र सीमित हुन्छन् । जब ठूलाबडा, हुनेखाने र पढेलेखेकाहरूका स्वार्थमा धक्का लाग्छ, अनि तिनै ठूलाबडाले सोझासिधा जनतालाई उक्साएपछि मात्रै विद्रोह हुन्छ । तर डिवम्बना त्यस्ता आन्दोलन र विद्रोहका उपलब्धि भने तिनै ठूलाबडाले मात्रै पाउँछन्, गरिब जनताका हातमा केही पनि पर्दैन । माओवादी नै उदाहरण छन् । माओवादीका नेता आज राजा महाराजा पल्टेका छन् भने त्यो विद्रोहमा होमिएकाहरू नांगाका नांगै छन् । सत्तामा बसेकाले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर असीमित अधिकार उपभोग गरिरहेका छन् भने जनताका कुरा सुन्नै छाडेका छन् । त्यसैले आज यहाँ जनतालाई सडकमा उतार्नेहरू नै मालिक बनेका हुनाले जनताले असह्य पीडा भोग्नुपरेको छ ।
एकछिन सोचौं त– आजसम्मका क्रान्ति, आन्दोलन, विद्रोह या द्वन्द्व केका लागि गरिएका थिए ? कसका बलमा गरिएका थिए र त्यसको फल कसले पाएका छन् ? समाजमा नैतिकता किन खलबलियो ? भ्रष्टाचार कसले गरेको छ ? बेइमानी गर्ने को हो ? आजको अराजकता र बेथिति नेताका कारणले होइन ? शक्ति कसको हातमा छ ? नेता मालिक बनेका छन् कि जनता ? आजको अशान्तिका कारक नेता हुन् कि जनता ? जनताको फिक्री कसले गरेको छ ? हुनुपर्ने के थियो र के भएको छ ? आजको अव्यवस्था ल्याउन नेता जिम्मेवार छन् कि जनता ? यहाँ त धनकै फिक्रीमा मन्त्रीहरू नै धमाधम जेल जाँदैछन् । जनतालाई दोष दिने ठाउँ कतै छैन । नेताजीहरू ! तपाईहरूले आआफ्नो नाम लिएर ‘मम’ भने हुन्छ । सर्वसत्तावादी सोच राखेर निरन्तर असीमित अधिकार प्रयोग गर्नु कुन प्रजातन्त्र हो ? आजको स्थिति त प्रजातान्त्रिक होइन, झन्झन् अनुदार बन्दैगएको छ । संघीयता र जातीयताका नारामा जनतालाई भुलाएर, जुधाएर देशलाई टुक्राटुक्रा पारेर समालिनसक्नु अवस्थामा पु¥याउन खोज्नु जायज हो ? देशप्रतिको जिम्मेवारीबोध यस्तै हुन्छ त ? जनताका प्रश्न हुन् यी ?
यहाँ राम्रा भनिएका मान्छेको असली चरित्र पनि देखिइसक्यो । रक्सी खाएपछि मात्र मान्छेको असली स्वाभाव थाहा हुन्छ रे । बाहिरबाट हेरेर मात्र मान्छे चिनिंदैन, रक्सी लागेपछि मात्र मान्छे भित्र के रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ रे । बाबुराम पनि सत्ताको नसा नलागुन्जेलका भलाद्मी, बुद्धिमान अनि के के विशेषण पाएका मान्छेको सक्कली रुप त अहिले पो खुल्दैछ । प्रधानमन्त्री पद जोगाउन उनले राष्ट्रिय ढुकुटीको चङ्खु नै खोलेर बसेका छन् । तराईको सम्बन्ध राजधानीसित टुटाउन धम्की दिनेलाई उनले छुनै सकेनन् । सत्ताको नसाले बाबुरामभित्रको सक्कली बाबुरामलाई अहिले बाहिर ल्याइदिएको छ । त्यसैले उनी अहिले आफ्ना भाषणहरूमा सफाइ पेश गर्ने उपक्रममा छन् ।
जनताका माझमा गएर जनइच्छा बुझेर जनता रिझाएर सत्ता प्राप्त गर्ने कि, जसरी हुन्छ बलै सत्ता कब्जाको राजनीति गर्ने ? यहाँ नेताहरूले दोस्रो विकल्प मनपराएका छन् । यतिखेर बाबुराम सत्ताको आघात ९क्जयअप०बाट इलेक्ट्रीफाइड छन् । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै इलेक्ट्रीफाइड छ, उनलाई छुन सकिंदैन । छोएमा जनतालाई नै करेन्ट लाग्छ । उनको फुर्ति जनसमर्थनले होइन, आयातित दक्षिणतिरको विद्युतको चमत्कार हो भनिंदैछ । जनतालाई लोडसेडिङ भए पनि प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्री (विशेषतः तराई केन्द्रीत) विद्युत्मय अर्थात् इलेक्ट्रीफाइड छन् । शायद यसैलाई शक्ति राजनीति भन्छन् क्यारे । त्यसैले पनि होला यिनीहरू जनताको उपेक्षा गर्न किञ्चित मान्दैनन् ।
नगर्नु भ्रष्टाचार गर्छन् । यदाकदा उजुर परेर अदालतले दोषी ठह¥यायो भने उल्टै अदालतमाथि नै जाइलागेर त्यहाँ पनि आफ्नो शक्तिको विद्युत प्रवाह फैलाउने दुष्प्रयास गर्छन् । हुँदाहुँदा अब त अदालतलाई पनि ६०१ जना भुस्याहा जमातको (अपवादबाहेक) अधिनमा राख्ने प्रलाप पनि गर्नथालेका छन् । यिनीहरूको के तन्त्र हो कुन्नि, शक्ति जति आफ्नै कुर्सीमुनि पार्ने प्रयासमा रहेको बुझिन्छ । शक्ति केन्द्रीत भयो भनेर एकातिर विना सुझबुझको संघीय व्यवस्था भन्न पनि छोड्दैनन् भने अर्कातिर शक्ति पृथकीकरणलाई लत्याउन खोज्दैछन् । विचित्रको स्थिति देखिंदैछ ।
आजको राज बलजफत र हुल्याईको राज भएको छ । जवर्जस्ती गर्नसके राज्य पनि पाइने तर सोझो बाटो हिंडेर देश र जनताको भलाइमा समर्पित हुनेहरू पाखा फालिने स्थिति तयार पारिंदैछ । हुल्याई गर्नसके आफ्नै गल्तीले मरे पनि दश लाखे शहीद बनाइन्छ । योग्यता नभए पनि समावेशी र समायोजन शब्द जोडेपछि पुग्यो । निरक्षरहरू समेत संविधान लेख्नेमा दरिए भने अरुको के कुरा ! यता स्नातकहरू भने सिपाहीमा भर्ना हुन पनि पाउँदैनन् । सम्पन्नहरूलाई आरक्षण र अग्राधिकारका हकदार बनाइएको छ । राज्यको साधन स्रोत पाखुरेहरूले दुरुपयोग गरिरहेका छन् । पार्टीका भातृ संगठनका सम्मेलन र अधिवेशनलाई लाखौं रुपैयाँ खर्च दिइन्छ सरकारी कोषबाट । नेताले नै राष्ट्रिय सम्पत्तिमा दाइ हालेका छन् तर गरिब जनताको बिचल्ली छ ।
सम्भवतः यस्तै स्थिति दर्शाउन चाणक्यले ‘वरम् न राज्यम् न कुराजराज्यम्’ अर्थात् कुराज्य चलाउनेहरूको राज्यभन्दा त बरु राज्य नै नहुनु वेश भनेका हुन् कि !